မှိုအစိတ်အပိုင်းများ | တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ 2011
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ & ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှု
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ connectors များအတွက်မှိုတည်ဆောက်, ပြွတ်, pipette အကြံပေးချက်များ. စင်ကြယ်သောအခန်းအတွက်မှိုဒီဇိုင်း, မြင့်မားသောတိကျမှု, မြင့်မားသော cavitation.
မော်တော်ကား & 3ဂ
မော်တော်ယာဉ်အနိမ့်ဗို့အားပါဝါ connectors နှင့်အာရုံခံကိရိယာများအတွက်တင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ် connectors တည်ဆောက်, 3လျှပ်စစ် circuit breaker အတွက် C မှိုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ, နှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ.
များအတွက်ထုပ်ပိုးများအတွက်မြင့်မားသော cavitation မှိုအာရုံစိုက်ပါ 30 နှစ်ပေါင်း, အလှကုန်ပစ္စည်းမရှိသောစုပ်စက်တွင်ကျွမ်းကျင်သည်, ကွန်တိန်နာ, 2-ထုပ်ထုပ်, ဝက်အူဖြုတ်ထုပ်, အစာရှောင်ခြင်းသေတ္တာဘူးနှင့်ကလေးခွက်.
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင့်မြင့်တင်သွင်းထားသော CNC စက်များနှင့်တိကျသည့်ကိရိယာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသော preision ရှုပ်ထွေးသောမှိုအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှိုအစိတ်အပိုင်းများတစ်ခုလုံးအတွက်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သော CNC အဖြစ်, EDW, EDM, ကြိတ်ခွဲစက်.
ကျနော်တို့မှိုအစိတ်အပိုင်းများ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးများအတွက်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သော CNC အဖြစ်, EDW, EDM, ကြိတ်ခွဲစက်.
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် Start ၏ဘဝပင်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလုပ်ဆောင်သည်, အထူးသဖြင့်သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်. ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ4ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများ, စက်မှုဒီဇိုင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု,6ထုတ်ကုန်အင်ဂျင်နီယာများ, အကဲဖြတ်ခြင်းမှကုန်ပစ္စည်းအထိလုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံကိုလိုက်နာပါ. စိတ်တိုင်းကျစီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သောရောင်းအားများကိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးဖြစ်သည်. အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးဌာနသည်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတည်ထောင်ခဲ့သည် 2011 နှင့်အတူ 2000 Dongguan မြို့တွင်တည်ရှိသည်စတုရန်းမီတာ, တရုတ်တောင်ဘက်.
Dongguan Start Precision နည်းပညာ: တိကျသောထုတ်လုပ်သူ
တိကျသောစက်အစိတ်အပိုင်းများ, Casting ထည့်သွင်း, ဆေးထိုးအစိတ်အပိုင်းများ
Dongguan Start Precision နည်းပညာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တိကျသောထုတ်လုပ်သူ နှင့်ပေးသွင်းသူ. ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်သူများကိုဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်. ၎င်းတို့တွင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်အသစ်သောတီထွင်မှုပစ္စည်းများအတွက်စိတ် ၀ င်စားမှုတိုးချဲ့သည်, ပိုမိုမြင့်မားသောအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို, နှင့်ပိုမိုကန့်သတ်ဘဝမှတ်တိုင်.
Dongguan Start Precision Technology ထုတ်ကုန်များ:
မှိုအစိတ်အပိုင်းများ, အစိတ်အပိုင်းများကိုထိုးသွင်း, မှိုထည့်ပါ, တိကျသောစက်အစိတ်အပိုင်းများ, တိကျသောစက်, တိကျသောကိရိယာများ, CNC ကြိတ်ခွဲ, ပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းများ, လမ်းညွှန်ဘုရှ်, မှို core ကို, ဆေးထိုးသိုက် lifter, Casting ထည့်သွင်း, ဆေးထိုးအစိတ်အပိုင်းများ, ပလတ်စတစ်မှိုဖြစ်စဉ်များ, နှုတ်ဆက်လိုင်းဆေးထိုးမှို, မှိုလိုင်, တံဆိပ်ခေါင်းလာကြတယ်, ပုံနှိပ်သေဆုံး နှင့် လာကြတယ် pin ကို တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်.
တိကျမှန်ကန်သော CNC စက်၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ငါတို့က တိကျသောစက် ထုံးစံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထုတ်လုပ်သူ တိကျသောစက်အစိတ်အပိုင်းများ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများနှင့်ကိရိယာများ. ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုလုပ်ရာတွင်လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလက်တွေ့ကျကျအကန့်အသတ်မရှိပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်များကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။. ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သော CNC မူဘောင်ကိုအအေးပေးသည့်စက်များတပ်ဆင်ထားသည်. ဒီလမ်း, သင်သည်သင်၏ပြင်ဆင်ထားပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုကယ်နှုတ်နိုင်ပါတယ်:
ကျနော်တို့ပါဝင်နေသည် တိကျသောကိရိယာများ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့. ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောကိရိယာများအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည်; ဤကိရိယာများကိုအာမခံချက်ပေးမှုနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်တန်ဖိုးထားသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများတိုင်းကိုတပ်ဆင်စဉ်ကာလအတွင်းသင့်လျော်စွာလိုက်နာရန်သေချာသည်, ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်အကောင်းဆုံးကိုသာရနိုင်သည်. အင်္ဂါရပ်များ:
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြောက်အများနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပုံသွင်းသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်သန့်စင်ထားသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့၏ထိပ်တန်းပြပွဲသေချာစေရန်နယ်နိမိတ်ကွဲပြားခြားနားပြင်းထန်စိတ်ထားကြသည်. အင်္ဂါရပ်များ:
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် တံဆိပ်ခေါင်းလာကြတယ် ပါရမီရှင်ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စု၏သိသာထင်ရှားသည့်အကူအညီဖြင့်ထိပ်တန်းအဆင့်တံဆိပ်ခေါင်းပန့်ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း. အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်, ဤရွေ့ကားလာကြတယ်စျေးကွက်၏အကောင်းဆုံးရောင်းချသူများအနေဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းအသုံးချဖို့လုပ်နေကြသည်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်း set ကိုလမ်းညွှန်ချက်များအရ, ကမ်းလှမ်းထားသောအကွာအဝေးကိုအပြောင်းအလဲမရှိသောမစုံလင်မှုအားဖျက်ဆီးရန်အပြောင်းအလဲရှိသောအရည်အသွေးနယ်နိမိတ်များကိုပြင်းထန်စွာစစ်ဆေးသည်. အင်္ဂါရပ်များ:
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်, ကြီးစွာသောပစ္စည်းများလိုအပ်မြောက်မြားစွာလယ်ကွင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းသည်ဖောက်သည်များ၏အရည်အသွေးနှင့်တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိစေသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။. အဘယ်ကြောင့် Dongguan Start Precision Technology ကိုရွေးချယ်ပါ?
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။. ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအလုပ်ခွင်ရှိလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်လမ်းညွှန်ပေးသည်. ထို့ကြောင့်, ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနည်းစနစ်သည်စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ် မူတည်၍ ဦး တည်ချက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်, ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးများကိုတသမတ်တည်းဇွဲရှိရှိပါလိမ့်မယ်. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။, တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။